हामी यहाँ छौं ! – मोफसल खबर
हामी यहाँ छौं !
काठमाडौं । संसद विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले माइतीघरबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ । ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्डसहित अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल, नेता झलनाथ खनाललगायतका नेता–कार्यकर्ताहरु प्रदर्शनमा सहभागी छन् । उनीहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चर्का नाराबाजी गरेका छन् ।नेकपाको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बानेश्वर माइतीघर सडकखण्ड खाली गराइएको छ । माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर संयुक्त पत्रसहित निर्वाचन आयोगमा जाने र २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने नेकपाको योजना छ
आज दुनियाँलाई नेकपाको आधिकारिकता देखाउनका लागि सडकमा आएका हौं : भुसाल
निवर्तमान मन्त्री घनश्याम भुसालले संसद पुनस्र्थापना भएन भने संविधानले काम गर्न छाड्ने र मुलुक अस्थिरतातर्फ फस्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि कृषि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका भुसाल शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बने । भुसालसँगै अर्का निवर्तमान मन्त्री योगेश भट्टराई पनि माइतीघरमा उपस्थित भए ।
माइतीघरमा भेलाएका बरिष्ठ नेता–कार्यकर्ताहरु अब निर्वाचन आयोगतर्फ जाने भुसालले बताए । नेकपामा आफूहरु ( प्रचण्ड–माधव समूह) नै आधिकारिक रहेको प्रमाणित गर्न र दुनियाँलाई सन्देश दिन निर्वाचन आयोगमा जान लागेको भुसालले बताए । साथै आजै सांसद अदालत जाने कार्यक्रम रहेको पनि भुसालले बताए ।
नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का नेता भुसालले भने, ‘अहिले हामी निर्वाचन आयोग जाँदैछौं र त्यहाँ एउटा निवेदन दिँदैछौं । खासगरी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत हामीसँग छ र हामी नै आधिकारिक हौं भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि र यो दुनियाँलाई देखाउनका लागि, त्यसमाथि जालझेल नहोस् भन्नका लागि हामी निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु जाँदैछौं ।’
सालले भने, अदालतको सुनुवाई आज सुरु हुन्छ, त्यहाँ पनि हामी सांसदहरु पुग्छौं । र, यसरी बहुमत सांसदहरु, बहुमत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु, हामी संसदको पुनस्थापनाको पक्षमा छौं र हामी आधिकारिक नेकपा हौं भन्ने आज हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
मन्त्रालय चलाइरहेका मन्त्री र सांसदहरु सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा भुसालले भने, ‘आजको प्रश्न भनेको संसदको पुनस्र्थापनाको हाम्रो माग छ । यो माग संविधानको रक्षाको माग हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘संसदको पुनस्र्थापना भएन भने हाम्रो संविधानले काम गर्न छोड्छ र फेरि मुलुक अर्को अस्थिरताको भुँवरीमा फस्छ । त्यसले गर्दाखेरि यो माग सांसदको मात्रै माग होइन । कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यको मात्रै माग होइन । यो समस्त लोकतन्त्रका लागि लडेका, लोकतन्त्रप्रेमी सबै नागरिकहरुको माग हो, मुद्दा हो । त्यसकारणले आज यो सबैको दायित्व हो ।’